Zavakanto & Kolontsaina · Mey, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Mey, 2010
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Mey, 2010
Japàna: Festival Sanja
Azia Atsinanana 16 Mey 2010
Zuco dia manapariaka andian-tsary mahatalanjòn'ny Festival Sanja izay fety nentim-paharazana ankalazaina any Asakosà, Tokyo, Japàna.
Iran: iza no mangalatra ireo sary vongana varahina?
Iràna 15 Mey 2010
Azo tarafina fa tany ahitana zavatra tsy ampoizina i Iran ary azo heverina fa tsy ho tapitra vetivety ireny. Nolazain'ny filazam-baovao iraniana sy avy any ivelany fa antony ara-pivavahana no ao ambadiky ny fahaverezan'ireo sary vongan'ny mahery fo iraniana 11 vita amin'ny varahina ireo. Anisan'ireo sary vongana very ny an'i...
Orogoay: Tatitra an-tsary fanatanterahana sarinjatovo
Amerika Latina 06 Mey 2010
Ny blaogy Con la Cámara en el Bolsillo [miaraka amin'ny saripika ao am-paosiko] dia mitatitra sy manapariaka sary avy any amin'ny faritry ny tanànan'ny Montevideo, (renivohitry) Orogoay. Vao tsy ela i Fonzi no nanapariaka tatitra an-tsary fanatanterahana sarinjatovo amin'ny rindrina iray [es].
Japàna: Karnavaly Cosplay
Azia Atsinanana 06 Mey 2010
The Englishman [Ilay rahangahy Anglisy] dia manapariaka andian-tsary maromaron'ny Karnavaly Cosplay [fiakanjoana sy fakan-tahaka ireo mpilalao tantara sariitatra] any Ozaka, Japàna.